Naghachi Data si iTunes ndabere - Wondershare Dr.Fone maka iOS
Naghachi Data si iTunes ndabere: Olee otú Iji
Launch Wondershare Dr.Fone maka iOS na pịa "naputa site na iTunes ndabere File". Mgbe ahụ, iTunes ndabere mgbake ngwá ọrụ ga-chọpụta niile iTunes ndabere faịlụ a na kọmputa na-egosipụta na ha na window. Ị nwere ike gosi nke na otu onye bụ onye gị mkpa dị ka ụbọchị ọ e kere.
Nzọụkwụ 2. iṅomi Data si iTunes ndabere File
Họrọ iTunes ndabere faịlụ na e dere ihe data ị chọrọ iji naghachi na pịa "Malite iṅomi". Ọ ga-ewe nkeji ole na ole wepụ niile data si iTunes ndabere faịlụ. Nwee ndidi.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake Data si iTunes ndabere
Mgbe a sekọnd ole na ole, ndị niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ha otu otu n'ihu mgbake. Mgbe ahụ ị pụrụ selectively akara na-agbake ndị ị chọrọ site na ịpị "Naghachi" button na ala. Ugbu a kọntaktị, ndetu na ozi pụrụ ozugbo natara gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-gị iOS ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa gị site na eriri USB n'oge mgbake usoro.
Atụmatụ: i nwere ike ịhụ na e nwere search igbe na N'ihi window. Site n'ebe ahụ, i nwere ike pịnye n'aha nke a faịlụ ịchọ ya.
Ọzọ: akwado Files & Devices